မြင့်မားသောလုံခြုံရေး0န်ထမ်း 120 မင်းမီးခံနာခံနိုင်ရည်ရှိသည့် Safe Safe ML-700
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ >2နာရီ Fire Rating Safes
နှစ်ဆ Key ကို MC-72 နှင့်အတူ 1 နာရီ Fireproof ကို Safe Box ကို
60min မီးသတ်ကိုခံနိုင်ရည်လုံခြုံရေး Safe MC-43-ထံမှ Weierxin Safe ထုတ်လုပ်သူ
* မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - 120 မိနစ်
* Handel:3ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
* အစိုင်အခဲသံမဏိသော့ခမ်း, အချင်း 30 မီလီမီတာ;
* 360 ဒီဂရီပွင့်လင်းနှင့်အတူချောမွေ့သောတံခါးကိုစစ်ဆင်ရေး;
အောက်ခြေရှိ Boade သေးသေးလေး,
ပုံစံ ပြင်ပအရွယ်အစား (MM) နေရာချထားခြင်း ပုံးအရွယ်အစား (MM) n.w<(ကီလိုဂရမ်)
ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောဆေး စင် အဈန့် ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောဆေး
3. hem အရည်အသွေး3ကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ။
4. လက်ယာရစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်ခြင်းနှင့်အတူ4။
2004 ခုနှစ်မှစ. Foshan Woshan Woshan Woshan City တွင် Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိပြီး0န်ထမ်း 100 ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်0န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Weierxin Safe သည်မီးလောင်ရာများ, ရုံးလုံခြုံမှု, ဟိုတယ်များ, သေနတ်များ, သေနတ်များ, စီ။ အီး။ ယူနစ် 500,000 ကျော်ကိုနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအိမ်, ရုံး, ဆေးရုံ, ဆေးရုံ, ဟိုတယ်စသည့်နယ်ပယ်များစွာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ Weierxin Safe သည်လူတို့နေထိုင်ရာ, အလုပ်နှင့်ကစားသည့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအများဆုံးအသိအမှတ်ပြုခံရ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်များတွင်အကောင်းဆုံးအတန်းအစားတန်ဖိုး, အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း, ကြာရှည်ခံမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, Weierxin Safe တွင်ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်သူ 1000 ကျော်နှင့်သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်5သန်းကျော်ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်းကမ္ဘာအနှံ့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်အများအပြား၏ oem ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ 2004 ခုနှစ်မှစ. ထုတ်ကုန်များကိုအစဉ်အမြဲအကောင်းမြင်ပြီးတိုးတက်လာပြီးပိုမိုများပြားသောအသုံးပြုသူများကိုလိုက်နာရန်နေတုန်းပဲ။ ကောင်းမွန်သော OEM နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်& OMD အတွေ့အကြုံ ..oem / odm အမှာစာများကိုကြိုဆိုသည်။ ကျနော်တို့ R ကို၌ကြီးသောအားသာချက်ရှိ&D, အထူးသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းဆိုင်ရာ safe တွင်ဖောက်သည်များ၏လုံခြုံမှုကိုစုဝေးစေပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
* မီးသတ် rating: 60 မိနစ်* Lock ကို: Key ကို Lock ကို* Handel: L ကို shap* စိုင်အခဲသံမဏိတုံး, အချင်း 24mm;* 180 ဒီဂရီပွင့်လင်းဖို့တံခါးလွှဲ;* အကြီးစားတာဝန်သံမဏိပတ္တာ;* Adjustments ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအတွင်း၌;* အောက်ခြေအပေါ်အသေးစားကက်ဘိနက်;
* Size: H430 * W380 * D310mm* မီးသတ် rating: 60 မိနစ်* Lock ကို: အီလက်ထရောနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်* စိုင်အခဲသံမဏိတုံး, အချင်း 24mm* 180 ဒီဂရီပွင့်လင်းဖို့တံခါးလွှဲ* အကြီးစားတာဝန်သံမဏိပတ္* Adjustments ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအတွင်း၌
120 မိနစ် Fireproof လုံခြုံရေး Box ကိုထုတ်လုပ်သူ-Foshan Weierxin ကို Safe
Size: စိတ်တိုင်းကျမီး rating:2နာရီသော့ခတ်: လက်ဗွေ + ကိန်းဂဏန်းကုဒ်
120 မိနစ်မီးခံလုံခြုံမှုလုံခြုံမှုသေတ္တာအဖြူရောင် - Foshan Whitexin